Booliska Kaalinka 5aad oo Koobay Dhulka Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Booliska Kaalinka 5aad oo Koobay Dhulka Somalida Ogadeeniya
Jul 22, 2009 Kaalinka 5aad, Ogaden
Wararka naga soo gaadhaya Magaalada Jijiga ayaa sheegay in Saraakiil ka tirsan ciidanka Somaliland oo maalmahanba ku xidhnaa Magaalada Jijiga la sii daayey maanta. Saraakiishan oo laga qabtay xadka iyaga oo si sharci daro ah ugu soo talaabay dhulka Somalida Ogadeeniya ayaa waxaa ay in muddo ah ku xidhnaayeen Xabsiga magaalada Jijiga ee loo yaqaan [Jeel Ogadeen].
Sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Kornayl Maxamed Cilmi Samatar [Dable] iyo Darawalkiisa oo la yidhaahdo Maxamed Cabdulahi Xasan, ayaa maanta lag siidaayey xabsiga, ka dib kolkii ay wada hadal yeesheen maamulka Jijiga iyo Maamulka Hargesya, oo ay ku heshiiyeen in uu sarkaalku khaldamay, khaladka sargaalkana ay tahay maamulka Hargesya oo khaldamay.
Maamulka Hargeysa ayaa waxaa uu ku doodaan in dad degan xuduuda u dhaxaysa maamulka Hargesya iyo Jijiga ay yihiin dad raacsan maamulka Hargeysa iyaga oo ilowsan in dadka maamulka dhulka Somalida Ogadeeniya dagan oo dhan ay Somali yihiin. Maamulka hargeysa ayaan isagu ku dhisan kal googayn iyo kala saar saarka ummada Somaliyeed, dhibaato weyna u gaysta ummada Somaliyeed ee ay degaanka wadaagaan.
Kilalka 5aad ee dhulka Somalida Ogadeeniya ayaa iyagu samaystay ciidamo sharciyeysan oo loogu talo galay in ay la wareegaan nabad galiyada dhulka Somalida Ogadeeniya. Ciidankaas Booliska ayaa waxaa ay haatan joogaan xuduuda dhulka Somalida Ogadeeniya, waxayna kala socdaan halkaas dhaqdhaqaaqa ururada la dagaalama xukuumada Tigray [Itobiya].
In kasta oo dadweynaha degan magaalooyinka ay ka cawdaan Ciidanka Booliska, ayaa dhinaca kale waxaa ay ixtiraam iyo wanaag u soo jiideen dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee degan xuduuda Somaliya, oo ay dhibaato u gaysan jireen maamulada is magacaabay ee Somalida.
Muddo dhawr goor ah ayaa dad shacab ah laga soo qabqabtay labada Somalida Punland iyo Somaliland, dadkaas oo kolkii dambe badankood la sii daayey, labada maamul oo iska dhigi jiray in ay ilaaliyaan xuduuda ayaa dhibaato ku hayey dadweynaha, arintaas oo aad moodo in ay soo gaabatay kolkii ay ogolaatay xukuumada Tigray in ay shaqaalayso dad u dhashay dhulka Somalida Ogadeeniya.
Maamulka Somaliland ayaa waxaa ay siiyaan dadka degan dhulka Somalida Ogadeeniya Aqoonsiga Somaliland, arintaas oo uu digniin culus ka soo jeediyey Taliyaha Booliska ee dhulka Somalida Ogadeeniya, isaga oo sheegay cidii lagu ogaado in ay haysato aqoonsi dal kale oo aan visa ku joogin in dalka laga masaafurin doono.
Hadaba, sarkaalkan Somaliland ee maanta la sii daayey ayaa cadeeyey in madaxda maamulka Somaliland ay had iyo goorba si sharci daro ah ku soo galaan dhulka Somalida Ogadeeniya iyaga oo u arkay, in dadkaasi ay yihiin Somaliland. Waxaana uu sheegay sarkaalku in wixii hada ka dambeeya uu badali doono wixii uu aaminsanaa oo ahaa, sarifka dadka Somalida ah si ay uga macaashaan.
Arimaha Bulshada [xuduuda]
Qayb 4aad: Su,aalaha Dadweynaha in Laga Jawaabo oo la Qanciyo waa Muhiim
Halmaan Hadal Kuma Jiro, ma khaldame waa Eebe Weyne